C# မှာ Form တွေကို share လုပ်ပြီး ရေးချင်လို့ပါ..... — MYSTERY ZILLION
C# မှာ Form တွေကို share လုပ်ပြီး ရေးချင်လို့ပါ.....
October 2009 edited December 2009 in C#
ကျွန်တော် C# နဲ့ window form application တွေကို ရေးတာ.. ဒီလူတစ်ယောက်ရေးတဲ့ Form နဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်ရေးတဲ့ Form ကမတူနိုင်ဘူး...ဒါပေမယ့် Project ကတော့ အတူတူဘဲ..မတူတဲ. Form တွေကို ရေးပြီး တူတဲ့ Project မှာ combine ပြန်လုပ်ချင်တာ...လုပ်လို့မရလို့ ကူညီကြပါဗျာ.....
ADD->New Existing Item->Add Form from Window form application
Now, I am not in Windows. So, I am not sure.
thawgyi wrote: »
အစ်ကို visual studio Source Safe ကို install လုပ်ပြီး ရေးပါ ။ ဒါဆိုရင် အစ်ကို Project ကို တစ်ခုတည်း ထားပြီး ရေးလို. ရပါတယ်။ ရေးချင်တဲ့ လူက Source Safe ကို ချိတ်ပြီး ၀င်ရေး ရုံနဲ.ရပါတယ်။